Liverpool Oo Ka Dalbatay Premier League In Baadhitaan Lagu Sameeyo Wixii Ka Dhacay Kulankii Merseyside Derby – Laacibnet.net
Liverpool Oo Ka Dalbatay Premier League In Baadhitaan Lagu Sameeyo Wixii Ka Dhacay Kulankii Merseyside Derby
Liverpool ayaa ka dalbatay maamulka Premier League in baadhitaan lagu sameeyo wixii ka dhacay garoonka Goodison Park kulankii ay shalay barbarraha 2-2 ku kala baxeen Everton, taas oo laba qalad oo waaweyn ay ka tirsanayeen VAR.
Reds ayaa ku doodday in si badheedh ah looga hor joogsaday saddex dhibcood oo ay xaq u lahaayeen kaddib markii laga diiday gool sharci ah oo aan wax qalad ah ku jirin oo ay dhaliyeen dhamaadkii ciyaarta, kaas oo VAR uu ku tilmaamay OFFSIDE.
Arrinta labaad ee ay baadhitaanka ka dalbadeen ayaa waxay uu yahay qaladkii uu goolhaye Jordan Pickford ku galay Virgil van Dijk oo uu taako xun kaga qabtay lugta, taas oo keentay in uu dhaawac culus soo gaadho xiddigan, lana sheegayo in ay suurtogal tahay inuu ka maqnaado xili ciyaareedkan oo dhan. Pickford ayaan wax kaadh ah la siinin iyadoo uu si cad ugu qalmayay in garsooruhu uu ku abaalmariyo casaan oo uu ciyaarta ka saaro.
Taas beddelkeeda waxa uu sameeyey in kaliya uu tilmaamo offside uu ku jiray Van Dijk iyadoon waxba laga soo qaadin qaladkii weynaa ee lagula kacay.
Labadan dhacdo ayaa waxay keeneen in Liverpool ay ka dalbato Premier League in baadhitaan lagu sameeyo, isla markaana laga qanciyo sababta ay u dhaceen.
Dhacdada hore ee dhaawaca Van Dijk oo aan gebi ahaanba laga soo eegin VAR, xataa iyadoo uu difaacani muddo garoonka dhex yaallay oo lala tacaalayay xaaladdiisa ayaa ah midda sii daran ee layaabka ku noqotay Reds.
Tababare Jurgen Klopp oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Dhaawaca Virgil van Dijk oo dhacay waqti hore oo ciyaarta ah, dib looma soo eegin, wayna iska caddayd in aanu offside badan jirin laakiin Picford waxa uu gebi ahaanba laagay Van Dijk oo uu ciyaarta ka saaray.
“Markii iigu horreysay ee aan sidan oo kale arko ayay ahayd, dib ayaanan u daawan doonaa. Waxa kaliya ee aan dib u daawaday ee aan sida kooban ugaga hadlay qolka lebbiska wuxuu ahaa goolkii Henderson iyo baaskii Sadio oo aanan ku arag offside, waanan ka xumahay. Waxa laga yaabaa in qof uu ii sharrixi doono, balse sawirka aan arkay muu ahayn Offside, wuxuuse offside u noqday sababtoo ah may jirin cid go’aamisay.”
Liverpool ayaa kusoo laaban doonta garoomada habeenka Arbacada oo ay safar ugu tegayaan kooxda Ajax oo ay kulankooda ugu horreeya xili ciyaareedkan ee Champions League kula soo ciyaari doonaan magaalada Amsterdam.